China Pipe truss mveliso kunye nabenzi | Honghua
Umbhobho welding okwabizwa ngokuba welding umbhobho sentsimbi, ipleyiti intsimbi esisiseko okanye umcu emva crimping kwasekwa welding umbhobho sentsimbi. Inkqubo yokuvelisa umbhobho wesinyithi ilula, ukusebenza ngokufanelekileyo kwimveliso ephezulu, iindidi kunye neenkcukacha, izixhobo ezincinci, kodwa amandla ngokubanzi asezantsi kunombhobho wesinyithi ongenamthungo
Umbhobho welding okwabizwa ngokuba welding umbhobho sentsimbi, ipleyiti intsimbi esisiseko okanye umcu emva crimping kwasekwa welding umbhobho sentsimbi. Inkqubo yokuvelisa umbhobho wesinyithi ilula, ukusebenza kakuhle kwimveliso, iindidi kunye nokubalulwa, izixhobo ezincinci, kodwa amandla ngokubanzi asezantsi kunombhobho wesinyithi ongenamthungo. Ukusukela ngeminyaka yee-1930, kunye nophuhliso olukhawulezayo lwemveliso yokuqengqeleka eqhubekayo yomgangatho ophezulu wentsimbi kunye nenkqubela phambili ye-welding kunye netekhnoloji yokuhlola, umgangatho we-welding seam uye waphuculwa rhoqo, iindidi kunye nokubalulwa kwepayipi yentsimbi e-welding iyanda, kwaye Umbhobho wentsimbi ongenamthungo ubuyiselwe endaweni engaphezulu nangakumbi. Umbhobho wentsimbi otyhidiweyo unokwahlulahlulwa ube ngumbhobho othe tye otyhidiweyo kunye nombhobho ojikelezayo ojikelezayo.
Ulwahlulo lwemibhobho edibeneyo
Ulwahlulo lombhobho odibeneyo ngokusetyenziswa: Ngokokusetyenziswa kwayo, inokwahlulahlulwa ibe ngumbhobho odibeneyo, i-galvanized welded pipe, i-oxygen evuthayo ipayipi, i-sleeve yocingo, i-metric welding pipe, ipayipi ye-roller, ipayipi yombhobho onzulu, ipayipi yemoto, ipayipi yombane, i-welding umbhobho obhityileyo wodonga, umbhobho owenziwe okhethekileyo kunye nombhobho odibeneyo.
Ububanzi besicelo semibhobho edibeneyo
Iimveliso zombhobho zentsimbi zisetyenziswa ngokubanzi kwiibhoyila, ezimotweni, kwiinqanawa, kulwakhiwo lwesakhiwo sokukhanya seminyango kunye neentsimbi zeWindows, ifanitshala, zonke iintlobo zoomatshini bezolimo, ukunikezela, umbhobho osongelwe ngocingo, iishelfu eziphakamileyo, izikhongozeli njalo njalo. Ngaba ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi, iinkcukacha ezizodwa ukuwelda umbhobho ingaqhubekeka ngokweemfuno zabathengi.
Egqithileyo Ubume obukhethekileyo
Okulandelayo: Ikholamu yombhobho